खोज इञ्जिन हत्या: एक नयाँ उद्योग
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
खोज इञ्जिन हत्या। के तपाईंले यसको बारेमा सुन्नुभयो? तपाईं हुनेछ।
यो हप्ता, एसईओ विश्व थियो बदल्यो उल्टो तल जब गुगलले JC Penney लाई स्पामको कारणले गर्दा सूचकांकमा छोड्ने निर्णय गरे, कुञ्जीशब्द समृद्ध ब्याकलिks्क क्रमशः माथि पुश गर्नको लागि आफ्नै बाहेक अन्य साइटहरूमा फेला पर्‍यो।
जबकि सम्पूर्ण उद्योग चकित हुँदैछ, धेरै जसो उद्योग भित्र हामी जान्दछौं कि यो एकदम सामान्य अभ्यास थियो। तथ्य यो हो कि गुगलको पृष्ठ र्याक एल्गोरिथ्ममा यो भिन्नताले ढोका यति ठूलो छोडिदियो कि यो लगभग धेरै असम्भव छ कि तपाईंको एसईओ फर्मले यसको फाइदा उठाएन। उद्योग भित्रका मानिसहरु उनीहरुलाई मूर्ख, अल्छी र बेईमान भन्छन्। म शर्त गर्छु कि धेरै आलोचकहरू जसले एसईओ अभ्यास गर्दछन् केहि खोजशब्द रिच ब्याकलिंक्स कतै अर्को साइटमा उनीहरूको स्तर निर्धारण गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँछन्।
ब्याकलिinking्क हो विशाल उद्योग। कम्पनीहरूले लाखौं डलर ब्याकलिinking्क गर्ने संगठनहरूसँग खर्च गर्न र लाखौं डलर बिक्री गर्न सक्दछन्। दिमागमा राख्नुहोस् कि यद्यपि अनैतिक यो यस्तो धोखा हुन सक्छ, यो अवैध छैन। सबै ईमानदारी मा, म बैकलिंक्स को लागी भुगतान को लागी कम्पनीहरु लाई दोष दिन सक्दिन
म हाल एक ग्राहकसँग काम गर्दैछु जो आफ्नो प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिरहेको छ र हरेक हप्ता हजारौं स्प्यामी ब्याकलिks्कहरू जम्मा गर्दैछ। तिनीहरूले मेरो ग्राहकलाई हजारौं सर्तहरूमा कुटे र आफ्नो पैसा बनाउँदछन्, विडंबनाका साथ गुगल विज्ञापनहरूबाट टाढा। चोटपटकमा अपमान थप्न, तिनीहरूको तेजस्वी संस्थापक निरन्तर गुगलको बट चुम्बन गर्दैछ र SEO उद्योग कत्ति बेइमान छ भन्ने बारे लिन्छ - सबै जबकि उहाँ ब्याकलिks्कहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ।
म आफ्नो ग्राहकलाई के भन्न सक्छु? म तिनीहरूलाई सुझाव दिन्छु कि अधिक स्रोतहरू र अधिक समय सामाजिक मिडियामा सम्भावित आगन्तुकहरूलाई संलग्न गराउन। यो महँगो छ, यो समय उपभोक्ता हो, र लगभग फिर्ती छैन कि केवल ब्याकलिks्कहरू खरीद गर्ने थियो। पछाडि जोड्ने उद्योग मान्छेहरू मेरो परामर्श लागतको एक अंशमा उनीहरूको सेवाहरू प्रदान गर्दै काठमाडौं बाहिर आउँदा निलउन गाह्रो पिल हो।
तथ्य यो हो कि यो एसईओ उद्योग मुद्दा होइन, यो गुगल मुद्दा हो। ब्याकलिks्कहरूमा यति भारी रैंक तौल गरेर, गुगलले एक अरब डलरको उद्योग सुरु गरेर विषाक्त पारेको छ जहाँ पेशेवरहरूले सजिलैसँग उनीहरूलाई खेल दिन सक्छन्। गुगलको उत्तर अझ खराब हुन सक्छ, यद्यपि। कालो टोपी ब्याकलिinking्कको लागि सूचकांकबाट JC Penney लाई छोड्दै, Google ले अझ धेरै दुष्ट उद्योग सिर्जना गरेको छ, खोज इञ्जिन हत्या उद्योग।
यो एक यस्तो उद्योग हो जुन फूल्छ यदि Google निकट भविष्यमा अधिक र अधिक कम्पनीहरु संग यो दृष्टिकोण ले। ब्याकलिinking्क गर्ने उद्योग विकास गर्न जारी रहनेछ - तर यस पटक यो तपाइँको साइटमा ब्याकलिink्क हुने छैन, यो तपाइँको प्रतिस्पर्धी साइटमा स्प्याम्मी, कीवर्ड युक्त ब्याकलिks्कको ट्रेल छोड्नेछ। एसईओ परामर्शदाता कडा मेहनत गरीरहेछ कि गुगलले लिने ट्रेललाई छोड्दैन जुन उनीहरूको ग्राहकलाई दर्जा दिईन्छ, तर प्रतिस्पर्धीहरूलाई अझ स्पष्ट ट्रेल छोड्न सक्दछ।
अब कालो टोपी एसईओ परामर्शदाताहरु संग अर्को हतियार छ। उनीहरूको ग्राहकको स्तर बढाउन काम गर्दा तिनीहरू प्रतिस्पर्धाको रैंकिंग नष्ट गर्न सक्छन्। यो उद्योग को लागी राम्रो छैन।
अद्यावधिक: SearchDex, SEO कम्पनी अनुसन्धान द्वारा लक्षित र पछि JC Penney द्वारा निकालिएको निम्न घोषणा गरेको छ:
न्यु योर्क टाइम्सको लेखमा उल्लिखित लिinking्क योजनाहरूलाई सर्चडेक्सले भाग लिएको छैन, न त समर्थन गरेको छ। हाम्रो कम्पनी उच्च नैतिक मापदण्डमा निर्मित छ र कुनै पनि बिन्दुमा हामीले अनुचित लिinking्क योजनाहरू वा अन्य गेम प्रविधिहरूको प्रयोग हाम्रो ग्राहकहरूको लागि कार्यक्रममा समावेश गरेका छैनौं। हाम्रो सबै ग्राहकहरूको लागि SearchDex द्वारा नियोजित SEO रणनीतिहरू, विगत र वर्तमान, गुगलको वेबमास्टर दिशानिर्देशहरू अनुरूप छन्। NYTimes कथाको नतीजाको रूपमा, SearchDex ले प्रमाणित गरिरहेको छ कि हाम्रो ग्राहकहरुका लागि नियोजित सबै रणनीतिहरु Google को वेबमास्टर दिशानिर्देशहरु को लागी पालन गर्न जारी छ। हामी लेखमा उल्लेखित लिंकहरूको स्रोत र प्रेरणा निर्धारण गर्न प्रयास गर्न औपचारिक अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं। - डेव चापलिन, सीईओ
टैग: नकारात्मक एसईओसमुद्रखोज इन्जिन हत्याएसईओएसईओ उद्योग
फेब्रुअरी १,, २०११ 19:१:2011 अपराह्न
यी अन्य साइटहरूले सामान्य रूपमा सर्तमा के गरेका छन् तपाईं वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईं हजारौं साइटहरूले JC Penney साइटसँग लिंक गर्नुभएको छ र जेसी Penney ले यो विशेषाधिकारको लागि तेस्रो पार्टी मार्फत भुक्तान गरिरहनुभएको छ भनेर भनिरहनु भएको छ?
के त्यो विज्ञापनको अर्को रूप होइन?
हो, तपाईं सहि हुनुहुन्छ। जेसी पेन्नीले (जानेर वा अन्जानमा) एउटा एसईओ फर्मलाई भाडामा लिए जुन उनीहरूलाई एकदम संक्षिप्त फिर्ता लि distrib्क वितरण गरेर क्रमबद्ध बनाउँदछ - त्यो हो एन्कर ट्याग भित्र रहेको पाठलाई कुञ्जी शब्दमा पूर्ण रूपले अनुरूप गरिएको थियो जुन पृष्ठमा ट्राफिकलाई आकर्षित गर्ने थियो।
व्याख्याको लागि धन्यबाद। म भर्खर JC Penney साइट मा गए। उनीहरूसँग हाल # 695 XNUMX of को एक अलेक्सा पृष्ठ र --्क छ - एक खराब र rank्कको विचार गरीरहेन संसारमा लाखौं इन्टरनेट साइटहरू छन् जुन तपाईंको आँखाको लागि सबै खोजीरहेका छन्। साइटमा ब्याकलिink्क गर्न SEO प्रयोग गरेर मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै मुद्दा देखिरहेको छैन किनकी तपाईले यसलाई व्याख्या गर्नुभयो।
हामी सबैले आउन लागेका चीजहरूको सन्दर्भ सुरू गर्न आवश्यक छ।
त्यो लेखको सन्दर्भमा ... गुगलले जेसी पेनीलाई बस्ट गरेन। नयाँ
योर्क टाइम्स गरे। गुगलले केहि पनि गरेन जबसम्म प्रेसले यो फेला पारेन।
फरक उद्योगको साथ केहि उच्च स्थानमा PR PR मूल्यवान ब्लागहरू छन्
सन्दर्भ बनाम हजारौं अप्रासंगिक लिंकहरू।
हामीलाई के बारे चिन्ता गर्न आवश्यक छ SEO को अर्को विकास हो।
गुगलले डाउनलोड गर्न मिल्ने सामग्री सन्दर्भमा जान्छ
लेख र ब्लगहरू - निकट भविष्यमा।
न्यु योर्क टाइम्सले यसको पर्दाफाश गर्‍यो, तर यो अझै गुगल नै हो जसले एक पटक प्रमाण पाएपछि जेसी पेन्नेलाई दफन गर्‍यो। मँ पोष्टमा भनेझैं त्यो डरलाग्दो प्रस्ताव हो किनभने त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि JC Penney लाई सीधा ब्याकलिks्क जोड्दै। यसको मतलब अन्य एसईओ कम्पनीहरूले उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको प्रतिष्ठा र श्रेणी बिगार्न उस्तै रणनीतिहरू लगाउन सक्दछन्। के तपाईं सोच्नुहुन्न कि सियर्स र अन्य कम्पनीहरू जसले आफैंमा # १ स्थानमा फेला पारे उनीहरूले लाभ उठाइरहेका छैनन्?
किन डेभिड सेगल, न्यू योर्क टाइम्स, जेसी Penney छान्नुभयो? हुनसक्छ यो एक प्रतिस्पर्धी को एक उल्लेख थियो?
फेब्रुअरी १,, २०११ 20:१:2011 अपराह्न
SEA जसरी तपाईंले यसलाई कल गर्नुभयो, धेरै समयको लागि भएको थियो ... म सम्झन्छु कि यो २०० 2008 मा मूलधारको एसईओ सम्मेलनमा छलफल भइरहेको थियो (एक मान्य रणनीतिको रूपमा होईन तर प्रणालीलाई खेल्नका लागि अन्डरहेन्ड मार्गको रूपमा)।
पॉल, मैले सँधै अफवाह सुनेको छु तर यो पहिलो घटना जस्तो देखिन्छ जुन गुगलले लिइएको कारवाहीको पुष्टि गर्दछ। के तपाइँसँग उदाहरणहरू छन्?
जमीन भेदभाव रडार
प्रविधि लगभग विश्वको प्रत्येक भागमा कानूनी छ यो खोज इन्जिनमा तपाइँको कीवर्डलाई बढावा दिनको लागि अभ्यास गरिएको छ, अन्य डोमेनहरूबाट लंगर पाठ कुञ्जी शव्दको साथ एक पछाडिको लिंक लिंकहरू निर्माण गर्न र तपाइँको वेबसाइट प्रमोट गर्न धेरै प्रभावकारी विधि हो तर अब त्यहाँ सँधै आउँदछ जो कोही तिनीहरूको व्यवसायको लागी SEO गर्छन् कि Google लाई तिनीहरुको व्यापार गर्न को लागी कुनै पनि चीज गर्न सक्ने खतरा छ।
साइटको प्रतिस्पर्धाको बिरूद्ध मुकाबिलाहरू हेर्दा हामी तिनीहरूलाई कतिपटक एसईए आरोप लगाउँदछौं? र यती कतिवटा मुद्दा चलाइनेछ कानून बन्नु अघि व्यवहारलाई गैरकानूनी पारित गर्न।
चोटपटकमा अपमान थप्न, तिनीहरूको तेजस्वी संस्थापक निरन्तर Google को बट चुम्बन गर्दैछ र SEO उद्योग कत्ति बेइमान छ भन्ने बारे लिन्छ - जब उहाँ ब्याकलिks्कहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। "
मलाई लाग्छ मलाई थाहा छ तपाई को को बारे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 😉